देशका लागि योगदान गर्नेको मूल्याङ्कन खोई ? (दृष्टिकोण) » छलफल
देशका लागि योगदान गर्नेको मूल्याङ्कन खोई ? (दृष्टिकोण)
“माधवकुमार नेपाल व्यक्ति होइन, संस्था हो, पूर्वप्रधानन्त्री हो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको, नेकपालाई यहाँसम्म ल्याउन जीवन बलिदान गरेको, पार्टी एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, सबैलाई मिलाएर २१
महिनासम्म सरकारको सफल नेतृत्व गरेको, अनमिनलाई नेपालबाट फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, समाज परिपर्तनका लागि संघर्ष गरेको सिंगो जीवन राजनीतिक दाउमा लगाएको व्यक्तित्व हो । उहाँ पनि तीन करोड नेपालीको नेता हो ।”
हालै सम्पन्न एसिया प्यासेफिक समिटका बारेमा हालका प्रधानमन्त्री र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जोडेर केही मिडिया, केही बुद्धिजीवी र प्रमुख प्रतिपक्षले बदनाम गर्न खोजेका छन् । यो विरोध गर्ने केही मुद्दा नपाएर नकरात्मक मुद्दा बनाउने कुसंस्कारका केहीलाई यो विषयले ग्रस्त बनाएको छ । नत्र यो समिटले उपलब्धि पनि दिएको छ । यसमा एउटा धर्मको बारेमा जसरी कुरा उठाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीका कटरवादी हिन्दु नेता विजय जोलि, नोवेल शान्ति पुरस्कार पाएकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सील आङसाङ सुकी, ३२ वर्षदेखि निरन्तर लडेर प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना गराएका कम्बोडियाका हुसेन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वानकी मुन, चीनका राष्ट्रपति कीमइल सुङ, भारतका राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अन्य देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखहरू आएर सहभागी भएका छन् । कतिपय देशका राजनीतिक पार्टीका नेता र नेपालका पनि थुप्रै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका छन् । काँग्रेसका
मुर्धन्य नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्राई, गणेशमान सिँह, मनमोहन अधिकारी , गिरिजाप्रसाद कोइरला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत दर्जनौ नेताहरू धेरै पहिलेदेखि सहभागी हुँदै आएका छन् किनकि यसको उद्देश्य नै शान्तिका लागि भएकोले कार्यक्रमले शान्ति, समृद्धि र पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । ४० भन्दा बढी देशका महत्वपूर्ण पाहुनाहरू सहभागी भएर नेपालको शान्ति प्रकृयाका बारेमा बुभ्mने र त्यसलाई विश्व समुदायमाझ पु¥याउन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । त्यसैले सबै कुरामा फाईदै फाईदा भएको उक्त कार्यक्रममा नेकपाका नेताहरू सहभागी भएको बारेमा विवादित बनाउन खोज्नु, गलत सन्देश दिन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउन सुरुदेखि अन्तयसम्म महत्वपूर्ण योगदन गर्ने
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र हालका प्रधानमन्त्री
केपी ओलीका बारेमा गलत प्रचार गर्नु राजनीतिक पाखण्ड र डाहाबाहेक केही
होइन । यस्ता आधारहीन, तथ्यहीन गलत प्रचारको कुनै अर्थ छैन । यसको खण्डन
र भत्र्सना गर्नुपर्दछ । हाम्रा हालका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली
र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल माथि तथ्यहीन
आरोप लगाउनु भनेको आकाशतिर फर्किएर थुक्नु र आफ्नै अनुहारमा पार्नु
जस्तै हो ।
यो समिटका बारेमा केही मिडिया मालिकहरू व्यक्तिगत गलत प्रचारमा लागेको देखियो यसमा पनि बढि प्रहार माधव कुमार नेपाललाई गरिएको देखियो, युनिफिकेशन चर्चमा २२ वर्ष देखि सम्लग्न भएको गलत र तथ्यहीन रिपोर्ट नै प्रसारण भएको छ, कि त्यो पुष्टि हुने तथ्य, सत्य प्रमाण पेश गर्नुपर्छ नत्र पुष्टि गर्न नसके गलत रिपोर्ट देखाउनेका बारेमा छानविन हुनुपर्छ, ती मिडिया माथि मुद्दाहालेर कारबाही गर्नुपर्छ किनकी माधवकुमार नेपाल व्यक्ति होइन, संस्था हो, पूर्वप्रधानन्त्री हो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको, नेकपालाई यहाँसम्म ल्याउन जीवन बलिदान गरेको, पार्टी एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, सबैलाई मिलाएर २१
महिनासम्म सरकारको सफल नेतृत्व गरेको, अनमिनलाई नेपालबाट फर्काउन
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, समाज परिपर्तनका लागि संघर्ष गरेको सिंगो जीवन राजनीतिक दाउमा लगाएको व्यक्तित्व हो । उहाँ पनि तीन करोड नेपालीको नेता हो । उहाँ हिन्दुको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ बुद्धिष्टको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, मुस्लिम र क्रिष्चियनको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ, कृष्ण प्रणामीको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ, इस्लाम धर्मालम्वीको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ । अर्थात जनताले बोलाए ठाउँमा सबै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ । देशका मुर्धन्य नेताहरू यस्ता सबै कार्यक्रममा जान्छन्, जानुपर्छ । नजाँदा व्यक्तिको वैयक्तिक र धार्मिक अधिकार हनन भएको ठह¥छ । त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रममा जान कुनै रोकटोक प्रतिबन्ध छैन । तर संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जनताको कार्यक्रममा जाँदा, देशको हितमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हाम्रा वरिष्ठ नेता माथि जुन खालको गम्भीर आरोप लगाइको छ, गलत प्रचार गरेर रिपोर्ट बजाइएको छ, त्यो गम्भीर आपराध हो । यसमा नेकपाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विदेशीद्वारा सञ्चालित यस्ता अपराधीलाई ठाडो
चुनौती दिनुपर्छ कि प्रमाण ल्याएर तथ्य पुष्टि गर कि सजायँको भागिदार
बन्न तयार होउ भनेर । त्यसैले यस्ता गलत र तथ्यहीन भ्रमित समाचार र
रिपोर्टको पछाडि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्नुपर्छ । एउटा सत्य के हो भने यो
समिट गरिरहँदा यसमा लाग्ने खर्चवर्च कहाँबाट आयो, कसले दियो, कति खर्च
भयो त्यसको जानकारीचाहिँ हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ । यो बिषयमा नेकपाकै
नेताहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो भने उचित छ । यो सकारात्मक कुरा
हो । यस्ता कार्यक्रम हुँदा पारदर्शी नै हुनुपर्छ । यो कुरा आयोजकले बुझाएका
होलान् वा बुझाउने नै छन् । अर्को, कतिपय प्रभावशाली नेतालाई समेट्न नसक्दा र समान हैसियतका केही नेता समिटमा सहभागी हुने सबैले हेरेर बस्नु पर्दा उहाँहरूको मनमा चित्त दुख्नसक्छ । त्यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन । यसलाई आउँदा दिनमा सच्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा आयोजकको ध्यान पुग्नुपर्छ । तर यसमा निहित स्वार्थ र कुत्सीत षड्यन्त्रकारी मान्छेहरू लागेका छन्, यसको सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ । अहिले पार्टी र सरकार शक्तिशाली छ । लाखैं नेता कार्यकर्ता भएको पार्टी जसले मुलुकलाई नै जुरुक्कै बनाउन सक्छ, संगठन माथिदेखि गाउँगाउँसम्म छ, तर यस्तो अवस्थामा पार्टीको बैठक नहुने यस्ता विषयमा पार्टीले जोड्दार रूपमा प्रतिवाद नगरेकोमा असन्तुष्टी आउने र प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । यस्ता विषयमा पार्टीले ध्यान दिनै पर्छ । पार्टी एकता प्रकृया ढिलाहुँदा र नेताहरूको कार्यविभाजन नहुँदा यस्ता समस्याको समाधान गर्न अप्ठेरो भएको हो ।
सिंगो पार्टी परिचालन हुने पार्टीका निर्देशनहरू तलसम्म पु¥याउने कुरामा समस्या भएर यस्तो समस्या भएको हो । अहिले बल्ल तल्ल प्रदेश कमिटी बनेको छ, केन्द्रीय, स्थायी र सचिवालयवाहेक अन्य कमिटीहरू बनेका छैनन् । बैठक मेलाहरू हुन सकेको छै्रनन् । यस्तै कारणले पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न सकेको छैन । यसलाई चाँडै हल गर्न पार्टी नेतृत्व, वरिष्ठ नेताहरू, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी लागिहाल्नु पर्छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जावस्, मेरो भन्नु यत्ति ।
प्रधानमन्त्रीले होइन कानुनले कारबाही गर्छ: मन्त्री महतो
चलचित्र क्षेत्रमा सपना बुनिन्छ, सपना बेचिन्छ र सपनामै रमाइन्छ: निर्देशक श्यामराजा श्रेष्ठ
यस्तो पो नवजोडी !
नेपाल टेलिकमको नयाँ टेक्नोलोजी घरघरमा